Weather in Bali in February ~ Journey-Assist - fialantsasatra any Bali amin'ny volana febroary
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali tamin'ny febroary
Weather in Bali tamin'ny febroary
Febroary, iray volana hafa amin'ny vanim-potoana ambany ao Bali. Raha fitambaran'izany dia io no tsy mampahay indrindra amin'ny lafiny toetrandro. Noho izany, raha mandeha any amin'ity nosy ity ianao mandritra ny fotoana fohy amin'ny volana febroary, dia azo inoana fa tsy hahita andro mafana ianao fa tsy andro tsy misy orana.
Ny mari-pana any Bali amin'ny volana febroary
Ny mari-pana amin'ny volana febroary dia mijanona ho avo ary miakatra manodidina ny haavon'ny 31 ° amin'ny tolakandro. Ny mari-pana amin'ny volana febroary dia eo amin'ny 23-25 ​​° Celsius.
Ny mari-pana ny rano amin'ny ranomasina. Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika.
Ny haavon'ny rano dia tena avo ary 28 ° Celsius. Saingy toa tsy dia mahazo aina ny fialantsasatra amoron-dranomasina noho ny fisian'ity volana ity izay misy rivotra mahery sy onja avo. Amin'ity tranga ity, ny hetsika miolakolaka dia mihetsika mavitrika. Fa ny tena mahaliana indrindra dia ny fitomboan'ny fotona entin'ny ranomasina mankany amin'ny torapasika. Fanampin'izay, andro vitsy na tsy misy masoandro dia tsy manao fialantsasatra amoron-dranomasina amin'ny faran'ny volana Febroary.
Ny rivotra dia masiaka sy feno. Ny Humidity dia somary mihena kely noho ny volana Janoary ary 75 °. Ny rahona matevina. Any amin'ireo faritra be tendrombohitra sy any Batura caldera, zavona matevina.
Ny orana sy ny orana volana febroary
Mihena 22 andro isam-bolana ny salanisan'ny orana amin'ny febroary. Tiako ny milaza fa mandritra ny alina sy mandritra ny fotoana fohy ihany ny orana, nefa tsy ho tanteraka izany. Ny orana amin'ny volana febroary dia tsy ampoizina ary mety amin'ny fotoana rehetra mandritra ny andro.
Surfing any Bali tamin'ny Febroary
Ny fitsidihana tamin'ny volana febroary dia sarotra satria rivotra mahery sy onja mahery no tsy mety. Ary ny fako mitsinkafona amin'ny onja dia zara raha mahavariana. Ny fako mampivadika ihany koa dia mahatonga io fanatanjahan-tena io tsy ara-potoana amin'ity volana ity.
Salanisan'ny salanisa 4 / 5. Isan'ny isa: 1